R/wasaare Sharma?arke oo soo gaarey Galkacyo. [Akhris …] – Radio Daljir
R/wasaare Sharma?arke oo soo gaarey Galkacyo. [Akhris …]
Agoosto 17, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 17 – R/wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdulrashiid Cali ayaa soo gaarey daqiiqado ka hor Madaarka Magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee DG Puntland, waxaana Ra?iisul Wasaaruhu uu hoggaaminayey wafdi heer sare ah oo ay ku wada jiraan labada Gole ee DFKMG ee Soomaaliya.
Wasiirka Koobaad ayaa waxaa ku soo dhaweeyey garoonka dayuuradaha ee magaalada Gaalkacyo Madax sar sare oo ka tirsan DG Puntland sida Madaxweynaha Puntland, Madaxweyne ku xigeenka, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo xubno badan oo ka tirsan golaha Wasiirrada, iyada oo halkaasina lagu diyaariyey ciidammo aad u badan si ay u sugaan amniga iyo kala danbeynta.
Waxaa sidoo kale ka qeyb qaatey soo dhaweynta Ra’iisul Wasaaraha Dadweyne aad u tiro badan oo ruxayey caleemo iyaga oo safnaa gudaha, bannaanka iyo ardaayada hore ee madaarka Gaalkacyo.
Wafdiga Ra?iisul Wasaare Cumar Sharma?arke ayaa loo sii gudbiyey gudaha magaalada Gaalkacyo iyaga oo ka dagay Hoteel Taar halkaas oo uu sidoo kalena ku suganyahay Madaxweynaha DG Puntland Cabdulraxmaan Faroole.
Ra?iisul wasaaraha ayaa la filayaa in galabta uu kula hadlo saxaafadda isaga oo sheegey in uu ka warbixin doono safarkiisa iyo ujeeddada socdaalka ee uu halkaan u yimid.
Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya ee xilligan ayaa booqashadiisani waxaa ay tahay tii ugu horreysey ee uu yku yimaado Puntland tan iyo markii loo magacaabey xilka Ra?iisul Wasaare nimada.
Waxbixin dheeraad ah: Safarka R/wasaare Sharmaarke ee Puntland.
Galkacyo, Aug 17 – Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali, iyo wafti ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa daqiiqado ka hor ka soo degay Madaarka Magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
R/wasaaraha oo horkacayey wafti ballaaran oo iskugu jira golayaasha xukuumadda iyo Baarlamaanka ee dawladda KMG ah ee Soomaaliya, ayaa si diirran loogu soo dhaweeyey halkaasi, waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb galay madaxda sare ee dawladda Puntland iyo boqolaal dadweyne ah, kuwaasi oo ku dhawaaqayey heeso wadani ah iyo hal ku dhigyo muujinaya sida loogu faraxsan yahay imaanshaha r/wasaaraha iyo waftigiisa.
M/weynaha Puntland Dr C/rixmaan Maxamed Maxamuud ?Faroole? kuxigeenkiisa C/samad Cali Shire, guddoomiyaha golaha wakiillada Puntland C/rashiid Maxamed Xirsi, qaar ka mid ah golaha xukuumadda Puntland, xildhibaano iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada Galkacyo ayaa muddo saacado ah ku sii sugnaa garoonka diyaaradaha si ay u soo dhaweeyaan waftiga uu horkacayo R/wasaare Sharmaarke.
Markii uu R/wasaaruhu ka soo degay diyaaraddii uu saarnaa, waxay si diiran isku salaameen m/weynaha Puntland kuxigeenkiisa iyo waliba guddoomiyaha barlamaanka, waxaana sidoo kale oo dhammaanba uu gacan qaaday mas?uuliyiintii dawladda iyo dadweynihii soo dhaweynayey isagoo si dabacsan ugu marxabaynayey ugana mahadcelinayey wakhtigii badnaa ee ay garoonka ku sugayeen.
Waftiga ra?iisul wasaaraha, ayaa iskugu jira wasiirro, xildhibaano baarlamaan, mas?uuliyiin kale oo ka mid ah dawladda KMG ah ee Soomaaliya, waxaana ay ahaayeen xubnaha uu horkacyey r/wasaaruhu, Wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka, Madoobe Nuunow Maxamed, Wasiirka ganacsiga C/rashiid Maxamed Xidig, wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Cali Axmed Jaamac ?Jaangali?, wasiirka Boostada iyo sigaarsiinta C/risaaq Cismaan Juurile, Wasiirka Jaaliyadaha C/laahi As-haari, Wasiirka warshadaha C/rixmaan Jaamac Maxamed, waxaana sidoo kale waftiga ka mid ah 4 xildhibaan, Qusulka Soomaaliya u jooga Kenya, iyo waliba sarkaalka ugu sarreeya waaxda socdaalka ee dawladda Soomaaliya Mr Gaafow.
Ujeedada socdaalka ee r/wasaare Cumar C/rashiid Sharmaarke iyo wafigiisa, ayaa lagu tilmaamay in ay tahay la tashiyo ballaaran oo uu la yeelanayo dawladda Puntland, kuwaasi oo ay ugu horreeyaan xoojinta xiriirada xagga ammaanka ah, kuwa siyaasadda, dhaqaalaha iyo waliba waxkasta oo lagama maar-maan ah oo lagu xoojinayo xagga wada shaqeynta iyo iskaashiga Puntland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya.
R/wasaaraha iyo waftigiisa ayaa lagu wadaa in ay Puntland ku sugnaadeen in muddo ah isla markaana ay ka fara buuxsadeen dhammaan arrimihii ay u yimaadeen, waxaana la filayaa saacadaha soo socda r/wasaaruhu in uu saxaafadda la hadlo kana warbixiyo arrimaha ugu muhiimsan safarkiisa.
Waa markii ugu horraysay oo R/wasaare Sharmaarke, uu yimaado deegaanada Puntland tan iyo markii loo magacaabay xilliga r/wasaaraha bilowgii sanadkaan aynu ku jirno, waxaana tani ay tusaale buuxa u tahay xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeyey Puntland iyo dawladda federaalka ah.
R/wasaaraha Somaliya oo ka soo ambabaxey Muqdisho, kuna soo fool leh Galkacyo.
Galkacyo, Aug 17 – Waxaa laga dhawraya gegida dayuuradaha ee magaalada Gaalkacyo maanta, Ra?iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdulrashiid Cali iyada oo uu ka soo ambabaxayo magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa waxaa ku jira wafdi uu hoggaaminayo ku waas oo ka kooban labada gole ee DFKMG ee Soomaaliya ayaa waxaa ay ka soo ambabaxeen garoonka Dayuuradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana ku soo sagootiyey wafdiga Ra?iisul Wasaaraha Madax sar sare oo ka tirsan dawladda KMG ee Soomaaliya.
Lama garanayo ujeeddada rasmiga ah ee ka danbeysey sababta uu u soo booqanayo Ra?iisul Wasaaraha magaalada Gaalkacyo hase yeeshee warar hoose oo aannu ka heleyno xafiiska Ra?iisul wasaaraha ayaa ku soo warramaya in uu kulammo la yeelanayo Madaxweynaha Dawladda Puntland Cabdirixmaan Faroolle.
Dawladda KMG ee Soomaaliya iyo Puntland ayaa labadaba xiriirka ka dhaxeeya iminka waxaa uu yahay mid qunyar socod ah iyada oo ay labada Maamulba ay sheegeen in ay isku wanaagsanyihiin hase yeeshee waxaa jira muranno hoose oo u dhaxeeya labada dhinac ku waas oo ku aaddan sidii loo wada qeyb san lahaa gar gaarka iyo deeqaha soo gaara DFKMG iyo in Puntland qudheedhu ay ka kaabto dawladda dhexe waxyaabo badan oo dhinaca maaliyadda ah.
Waxaana la filayaa markii uu soo gaaro Ra?iisul Wasaaruhu magaalada Galkacyo in uu la kulmo Madaxweynaha Puntland Cabduraxmaan Faroolle.
Waxaii warar ah oo ku aaddan imaanshaha Ra?iisul Wasaaraha kala soco Daljir.com.
Waftiga R/wasaare Sharmaarke iyo madaxda dawladda Puntland oo saaka lagu wado in ay wadahadalo u bilaabmaan. [Akhris …]
Agaasimaha wasaarada warfaafinta Puntland oo ka xog waramay shuruuc cusub oo hagi doonta saxaafada Puntland. [Dhegaysi …]